Konke Okufuneka Ukwazi Ngo-SEO - I-Semalt Expert
Ukuphuculwa kweeInjini zokuPhangela ubugcisa bokudibanisa idijithali ngenxa yokuba abasebenzisi bafumana itransti kwiinjini ze-injini zokukhangela ezinye iinkcukacha zeewebhu. I-SEO ifaka iinkalo ezibalulekileyo zokuthengiswa komxholo kunye neendlela zokuthengisa iimveliso zedijithali, ezithintela indlela i-intanethi isebenzisana ngayo nabaxhasi babo. Ngendlela efanayo, iiwebhsayithi zivame ukuchaphazela ukuma kwazo ngendlela ye-injini ye-algorithm eyenza i-SERP. I-SEO inokwenza iwebhusayithi yakho ifumaneke kwindawo efanelekileyo kwiinjini zokukhangela amagama athile ophando. Iinkampani eziphumelelayo zinamaziko amaninzi e-SEO kwiiwebhusayithi zazo - larose posay cicaplast levres. U-Lisa Mitchell, u-10 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, ukholelwa ukuba ezinye zezona zinto zifuna ukuziqonda ziquka:
1. Yakha umxholo omhle. Ukubaluleka kokuqukethwe ngenye yezona ndlela ezigqwesileyo ezenza i-website ibe kakuhle kwiinjine zokukhangela. Ngenxa yoko, kufuneka ubhale umxholo ochaphazelekayo kunye nokugunyazwa kwi-niche yakho. I-algorithm ye-injini yosesho inokukwazi ukubeka phezulu kwi-SERP yamagama abalulekileyo abakho kumxholo wakho.
2. I-UX ibalulekile. Uluhlu lwephepha ludlala indima ebalulekileyo ekwenzeni iwebhusayithi yakho ibonakale. Umsebenzisi unokuba nexesha eliphezulu lokubandakanyeka kwisayithi ekhangeleka ngaphezu kweyodwa engathandekiyo. I-UX enye yezinto ezinokubangela ukuba indawo yakho ibonakale kuqala kwiKhendlo leGoogle. Kufuneka uqikelele ukutshala imali ebalulekileyo kwi-website yakho.
3. I-backlinking ibalulekile. Inxalenye yeminye imisebenzi ye-SEO njengamagama aphambili ekuphenyweni, kubalulekile ukudala i-backlink efanelekileyo ye-application kwiwebhusayithi yakho kunye neminye imisebenzi. I-Backlinks ekhomba kwiwebhusayithi yakho yandisa igunya le-domain yakho eyenza ivele kwimiphumo ye-injini yokusesha..Unokuzuza kwizithuthi ezingabakho kwimisebenzi ebonakalayo ye-SEO njengokuthumela abavakalisi kunye nokunikela ngemibutho engekho inzuzo.
4. Amandla okuhlalutya. Ezinye izixhobo ezibonelela ngamatriki e-ishishini zingaba zibaluleke kakhulu kumphathi wewebhu xa wenza i-SEO. Ngokomzekelo, unako ukulandelela kunye nokubeka esweni inkqubela yakho ye-SEO campaign usebenzisa ezi zixhobo. Kwakhona kunokwenzeka ukwenza utshintsho olufunekayo kwindlela iindlela zokusebenza zisebenza kwiwebhusayithi yakho. Ukulawula kwi-niche yakho kunokuba lula kumaqela athathisanayo kwindlela apho isayithi lakho lisebenza ngayo. Unako ukufezekisa iinzuzo ezininzi ezenza indawo yakho ibe yimpumelelo kwi-SEO campaign.
5. Imiba yokuThengiswa kweMidiya yeNtlalo. Enye yeendlela iindlela ulwazi olufumana ngayo intsholongwane ngokubelana. Izingosi zeendaba zoluntu zenza imbuyekezo yazo ngokwabelana nge-viral content. Abasebenzisi bangadlulisela iinqununu kwiwebhusayithi yakho kumanethiwekhi amanqaku anomdla.
6. Ukudalwa kokuqukethwe kuphela yinxalenye ye-SEO. Ukuthengiswa kokubaluleka kuyindlela ebalulekileyo abahwebi bafanele baqeshe kwiikhankaso zabo. Ngokomzekelo, kunokwenzeka ukwenza umkhankaso wokuthengisa ngokuphumelelayo xa wenza umxholo wewebhusayithi yakho. Ngelishwa, liphela kuphela kwisiqingatha seenkqubo ze-SEO jikelele.
7. Gweba izigwebo ze-Google. I-hat yoMnyama i-SEO inokubangela ukuba i-website yakho ityebe isigwebo esinzima sokubeka. Gwema amaqhinga angekho mthethweni njengokwenza izinto eziphambili kunye nokusebenzisa i-SEO engalunganga kumncintiswano wakho. Le nkqubo inokuphucula indlela abantu abasebenzisana ngayo newebhusayithi yakho.